FreeDOS? | Avy amin'ny Linux
Tamin'ny lahatsoratro faranyNiresaka momba ny solosaina finday niaraka tamin'ny rafitra miasa antsoina hoe FreeDOS (izay tsy heverinay ho rafitra miasa). Andao hiresaka kely momba an'ity.
Tamin'ny 1994, taorian'ny fanambarana nataon'i Microsoft fa nijanona tsy nanohana ny MS-DOS (handefa Windows 95 amin'ny taona ho avy izy ireo), Jim Hall (Mpankafy MS-DOS, toa ny mpankafy console eto amintsika), niaraka tamin'ny fanampian'i Pat Villani sy Tim Norman, napetraka teo an-tsorony ny laharam-pahamendrehana klone DOS, izay ho lasa sehatra voalohany ampahibemaso, nefa avy eo nanapa-kevitra ny hanafaka azy io, hanome alalana azy amin'ny GPL.
Androany, FreeDOS dia ao amin'ny kinova 1.1 (navoaka tamin'ny Janoary tamin'ity taona ity) ary ara-bakiteny mihoatra lavitra amin'ny rafitra Microsoft taloha, raha jerena fa nifanaraka tamin'ny fiovan'ny teknolojia tato ho ato izy (ity takelaka ity dia afaka miatrika hatramin'ny 4GB RAM, zavatra tsy azo eritreretina tamin'ny taona 90) ……… .Inona no lazain'izy ireo amiko fizarana ho an'ny milina taloha, LXDE sy izany rehetra izany. Eto isika dia manana rafitra console marina, ho an'ireo izay manana fampiharana taloha be amin'ny pascal, co basic (ary angamba cobol)
Androany izy ireo dia mivarotra milina maoderina (ary tena lazaiko fa maoderina) miaraka amin'ny FreeDOS napetraka. Betsaka ny milaza fa hampihena azy ireo mora kokoa satria lafo kokoa ny mivarotra azy amin'ny Windows. Marina izany, mitahiry vola be ianao amin'ny fanohanana (Ary tsy hanome anao boky torolàlana DOS izy ireo). Mandrosoa, mivoaka izany hevitra izany mora vidy kokoa solosaina misy FreeDOS fa tsy Ubuntu na Mint na distro linux rehetra. Ka na iza na iza, mividy solosaina amin'ireo aho ary manidina ny FreeDOS hametraka ny tenako amin'ny distro izay tadiaviko indrindra, eny fa na dia ny piraty amin'ny Windows aza. BAROAIN TENA!!!
Avelako ny rohy amin'ilay tetikasa ary manoro hevitra anao aho fa azo zahana tsy misy olana ao anaty boaty virtoaly
Loharano: http: //www.freedos.org/
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » FreeDOS?
Ary iza no hampiasa izany?
Ok, mahatalanjona ny console Linux ary saika ampiasaiko foana izy io, saingy nanandrana nampiasa MS-DOS ihany koa aho ary tsy misy ilana azy (izany no natahorako ny terminal voalohany). Ary mainka izany raha tsy misy tontolo iainana sary. Ny masinina rehetra atoraka anao dia rafitra fototra Linux.
Misy manandrana manao ao amin'ny DOS izay ataon'ny FFMPEG ao amin'ny console Linux.
MS-DOS dia mety miasa toy ny Linux console. Mba hanaovana izay ataon'ny FFMPEG amin'ny Linux, dia tsy maintsy apetrakao FFMPEG amin'ny MS-DOS:
Ankehitriny ny tontolon'ny sary dia ilaina amin'ny mpampiasa farany, izany no antony nisotroan-dronono MS-DOS, fa talohan'ny asa be dia be vita avy amin'ny console tsy nisy olana. Raha ny marina dia mbola afaka mampiasa ny baiko avy hatrany amin'ny baiko Windows ianao. Ary misy ny hafahafa izay mampiasa ireto zavatra ireto:
MS-DOS (na FREEDOS) dia tsy multitasking, tsy fantatr'i MS-DOS izay toerana fitahirizam-bokatra, MS-DOS tsy tonga miaraka amin'ny fitaovana fototra mahery vaika toa ny GNU (ampitahao amin'ny "ls" ny baiko, raha tsy mandeha ankoatr'izay), ny MS-DOS dia tsy manana modules an'ny kernel mampiakatra / mampidina, ny MS-DOS dia tsy manana vondrom-piarahamonina, ny MS-DOS dia tsy manana fanohanana, ny MS-DOS dia tsy misy ifandraisany mihitsy amin'ny iray amin'ireo Mpandika teny Linux.
Toa tsara amiko ny zavatra nosoratanao ary tsy manala ny hevitro izany. Aleoko ny console GNU im-arivo, fa ny MS-DOS dia mety ho toy ny asany (raha nisy nanolotra azy). Fanamarihana vitsivitsy:
Na dia tsy multitasking aza izy io, ao amin'ny MS-DOS dia misy zavatra antsoina hoe TSR. Nampiasa izany ny olona tamin'ny androny nefa tsy nisy ratra be.
Misy ifandraisany ny trano fitahirizana. Tsy handany vola na inona na inona ny famoronana rafitra mitovy amin'izany, Jereo ireo tetik'asa toy ny:
http://windows-get.sourceforge.net/index.php (manana safidy hafa antsoina hoe Appupdater ianao)
Miaraka amin'ny DIR *. * / Od, DIR *. * / V / os, DIR / s, DIR / aa afaka manao toy izany koa aho amin'ny ls -tr, ls -ls, ls -R, ls -a (fa manaiky aho miaraka aminao, matanjaka kokoa ny fitaovana fototra ao amin'ny GNU).
MS-DOS dia manana vondrom-piarahamonina geeks kely.
Ary mba hamaranana dia lazaiko aminao fa tsy tiako ny mampiasa ny tsipika baiko amin'ny rafitra fiasa rehetra. Ka somary misolelaka ahy ilay resaka.
Toa tsy mety amiko ny mampitaha ny fandefasana fandavana efa notapahina efa ho 20 taona lasa izay niaraka tamin'ny rafitra iray izay nivoaka tamin'ny taona 1994 (na dia teo aza ny gnu taloha). Mazava ho azy fa ambony noho ny olana ara-nofo miharihary i Linux ary satria manana fotokevitra "teoretika" amin'ny unix izy io, nefa koa unix sy DOS mikendry ireo fitaovana sy mpampiasa samihafa. Ny DOS dia nampiasa fitaovana tsy dia tsara loatra hiasa toa ny unix mainframes (noho izany antony izany dia nitohy hatramin'ny 9 ny fivoaran'ny win2000x, rehefa resy ny sakana 64mb tamin'ny solosaina PC vaovao, ilaina ny mampiasa NT). Ny DOS dia mety handefa programa na mpamily ao ambadika (manana magazine taloha aho izay niresaka momba izany). Ny DOS dia niaraka tamin'ny dingana voalohany amin'ny informatika manokana, tsy mila mividy dolara an'arivony ho an'ny lisansa unix na macintosh. Ny DOS dia nanana ary mbola manana vondron'olona mpampivelatra, misy programa amin'izao fotoana izao izay voasoratra eto amin'ity tontolo ity (azonao atao ny mahita programa ankehitriny ao amin'ny hirens boot cd). Ny DOS dia afaka mampiditra mpamily amin'ny fampidirana tsipika fotsiny amin'ny config.sys, amin'izany fotoana izany hampiasa linux dia mila manoratra ny mpamily ianao ary manangona azy. RedHat dia afaka nanao ny linux azo ekena amin'ny alàlan'ny rpm precompiled, noho izany ny fahombiazany. Tsy azonao atao ny mampitaha rafitra miasa roa amin'ny habaka roa samy hafa, toy ny fampitahana ny Atari TOS amin'ny DOS 6.22 na Ubuntu 12.10. Mazava ho azy fa tsy ho fantatry ny DOS ny atao hoe repository, na modules mafana, raha tsy nisy izany foto-kevitra izany na tsy nampiharina tamin'izany fotoana izany. Tsy dia niaina firy aho tamin'izay fotoana izay, tadidiko ihany ny fano, avaratra, handresy ary borosotra fa tamin'izay fotoana izay dia novolavolaina ny informatika manokana noho ny DOS.
morpheokmg dia hoy izy:
Ataoko, hehehe, ny fomba hifehezana W7, Vista na XP amin'ny Console, izy rehetra dia manana hery mitambatra amin'ny linux distro + ny console + MSDos (efa ao amin'ny M $ OS) hehehehehehehe. Tsy mampihomehy ve ny console ????
Mamaly an'i morfeokmg
10000 XNUMX euro no naloako tamin'ity volana ity, fantatrao ve ny antony? satria izaho dia iray amin'ireo bitika hafahafa satria misy milaza fa mahay mampiasa tsara izany rafitra miasa izany, maro amin'ireo orinasa lehibe indrindra no mampiasa rindrambaiko miasa eo ambanin'ny msdos ary tsy te-hanavao ireo rafitra vaovao, ary noho ny nahaterahako tamin'ny siansa informatika amin'izao fotoana izao dia miaina toy izao aho mpanjaka, na dia mampiasa linux koa aza aho dia mazava fa raha tsy maintsy manangana mpizara tsy manome olana amiko aho dia ataoko amin'ny linux, ... fa araka ny lazaiko anao dia mahasoa amin'ny zavatra betsaka ny mitranga dia tsy maintsy fantatrao ny fampiasana azy ...
Toy ny trozona
hehehe, toa mahaliana ilay izy, angamba hasehoko an'i Neny io; izy no nampianatra ahy hampiasa DOS fony aho zazalahy kely ^ _ ^
Izy io dia afaka mampahatsiahy ny andro taloha amin'ny alàlan'ny fandaharana amin'ny Turbo Pascal na Turbo C. 🙂 Na amin'ny lalao taloha izay no tsara indrindra. Saingy tsy azonao atao ao amin'ny DOS izay azonao atao amin'ny Linux.
Raha ny fanazavana, nahoana no mora kokoa amin'ny FreeDOS toy izay amin'ny linux? Izay tsy azoko?
Ho an'ny fanohanana. Raha mividy milina misy linux efa napetraka ianao dia azo inoana fa ho avy miaraka amina fotoana fanohanana ara-teknika ofisialy (herintaona ohatra). Izay no manampy lanja amin'ny solosaina. Ny zava-mitranga dia ny Windows, tsy ny fanohanana ihany no voampanga fa ny vokatra ihany koa, ary izany no mahatonga ny vidiny bebe kokoa.
AHA! Nodiovina. Misaotra betsaka. 🙂
Fanohanana Windows? Raha ny fanohanana dia azonao ilay boaty milaza hoe: mandefasa tatitra diso ... = x
Tsia. Izy io dia mandoa ka rehefa manana olana ianao dia afaka miantso amin'ny alàlan'ny telefaona ary napetrak'izy ireo tamina olona tsy fantatrao ny famahana izany na ny fiahiany, satria efa nandoa ianao dia tsy maninona.
Mazava ho azy: ny fanohanana dia voampanga amin'ny fividianana ny solosaina amin'ny varavarankely fotsiny. Mahafinaritra.
Cheats, fanohanana heverina fa tafiditra. Raha tena te hanome ny mpampiasa solony ianao fa tsy maka kinova toa Home, Pro, Ultimate, dia tokony hanolotra kinova mora vidy kokoa izy ireo raha tsy misy ny fanohanan-pifaliana. (Mazava ho azy fa ho very vola amin'izany lafiny izany).
Nampiasa roa aho vao tsy ela akory izay… mba hampandeha programa toa ny matoatoa, ody fizara ary acronis amin'ny pendrive (raha ny tena izy izay mampiasa Hirens Boot cd dia mampiasa DOS). Ny FreeDOS dia saika mifanaraka amin'ny bizina DOS rehetra ary ny kinova CD misy programa maro hijerena sary avy amin'ny console, play MP3, vakio ny ntfs, sns. Ny fitaovana izay ho hitako amin'ny DOS / FreeDOS dia ny fampiasana programa efa antitra na manokana, raha ny marina dia mbola afaka mahita azy amin'ny PC any amin'ny fivarotana lehibe na kioska (koa ny fitaovam-pitantanan-tena amin'ny mpampianatra), tsy mila mametraka windows miaraka amin'ny Serivisy / programa tsy ilaina izay mampiharihary ny filaminana.
Misy orinasa manana rindrambaiko manokana izay mihazakazaka ao amin'ny DOS ihany ary tsy manana fanoloana intsony ary ny fanovana ny rafitra famokarana iray manontolo dia mety ho lafo loatra ary amin'ny toerana izay tsy avelan'ny fitaovana hanahaka ny DOS. Ankoatr'izay dia heveriko fa tsy ilaina kokoa noho ny distro linux.
ka FreeDOS izany
Raha mbola maimaimpoana ao ambanin'ny GPL izy dia raisina tsara 🙂
ary azo ampiasaina ho HTPC ho an'ny efitrano fianarana ve ny FreeDOS? Mety ho zavatra mangatsiaka izany hehehehe. Aleoko mifikitra amin'ny Linux
lea_b dia hoy izy:
Noterena hametraka azy aho hatramin'ny nijanonan'ny MS-DOS fanohanana ary nila nametraka izany tamin'ny Pentium izay ampiasaina amin'ny fanadihadiana kaonty, izay anaovana ny fandaharana handrefesana sy hampandehanana amin'ny DOS (VAT, Salaries)
Tena tsara izy io ho solon'ny MSDOS, mahery kokoa aza izy io.
Tetikasa tena milay tanteraka, izay ahafahanao mampiasa milina efa tranainy 80268 386, sns. Eny, mbola manana azy ireo aho. Raha tonga ho an'ny TI-994a ahy dia apetrako koa
Mamaly an'i lea_b
Ahoana ny fomba hahazoana fiainana? (ho an'ny geeks Linux)